Prof. Geedi oo ah hogaamiyaha keliya oo aan ahayn dagaalooge oo kala kulmay filanwaa siyaasada Col. C/llahi Yusuf una dhow inuu iska casilo xilka wasiirka kowaad.
Prof. Geedi ayaa xilka wasiirka kowaad waxaa loogu soo xulay miisaan beleed, kaas oo ah inuu beelaha degan Muqdisho uu u qeyb qaado. Jagadaas waxey ahayd mid caalamka loogu muujinayey in la qanciyey beesha ugu tirada badan ummadda Soomaaliyeed. Xeelada nuucaasa ayaa ka soo jeeda fikirka ay adeegsadaan jabhada Tigreyda oo qowmiyada Oromada oo ah mida ugu tirada badan dalka Itoobiya xil maqaar saara iyo magac weyn huwisa.
Ujeedada rasmigaa ee Prof. Geeddi loogu magacaabay xilkaas waxaey ahayd in hogaamiyeyaasha hubeysan ee ka jira Muqdisho oo ay isku yihiin beel wadaaga uu tirtiro siyaasadooda mucaaradka ah, adduunkana uu ka dhaadhiciyo iney yihiin qowleysato aan mudneyn in la tixgeliyo awoodooda qabqablanimo oo ay ku heleen dagaalooganimo iyo qaanuunka dowlada oo ay diidan yihiin.
Profesoorka ayaa hadda waxaa ku soo baxay siyaasad loogu muujinayo inuu isgarto in laga maarmay misaanka beeshiisa, taasna lagu cadeeyey in Col. C/llahi iyo gudoomiye Shariif Xasan ay qaateen go’aan iyaga u gaara oo aan xataa isaga laga wargelin is kaba daa in taladiisa la dhegeysto.
Ujeedada siyaasadan ayaa salka ku heysa in Prof. Geeddi uu la yimaado is casilaad marba haddii loo muujiyey inuusan wax miisaana ku lahayn go’aanada culus ee laga qaadanayo siyaasada dowlada Soomaalida.
Mucaaradnimada Prof. Geeddi ayaa hadda waxey la bilaabaneysa isbaheysi cusub oo Kismaayo, Baydhabo iyo Bossaso lagu toleynayo, meesha dadka ka soo jeeda Muqdisho loo qorsheynayo itoobiyaan iyo ciidamo Afrikaana iney hubka ka dhigaan.
Waxaa dadka intiisa badan u muuqata in la soo gaaray waqtigii uu is casili lahaa Prof. Geeddi si uu uga badbaado in sharaf dhac intaas ka weyn ay kula sii dhaqmaan isbaheysiga cusub ee Baydhabo oo kuwada mideysan la dagaalanka Muqdisho.